Edgley Optica 1 afọ 9 ọnwa gara aga #1218
Nnọọ ! N'ihi na enweghị m ike inyocha faịlụ ahụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na anaghị m eji facebook (kama enwere m ezigbo ndị enyi) Achọrọ m ikwu na mgbe ahọpụtara ụgbọelu ahụ P3D Ihe omume V4 3 kwụsịrị ozugbo. M na-atụ aro ka onye edemede (yana Rikooo) wepụ ya dịka ọ dakọtara na ya p3D4 3.
Edgley Optica 5 ọnwa 1 izu gara aga #1620
Otu maka ụdị v4.5!
Edgley Optica 2 ọnwa 4 izu gara aga #1752
Gaa: 1) SimObjects> Airgbọ elu> Edgely Optica
Mepee: 2) Njirimara> Nche> Dezie> ma gbanwee iji nye ohere maka Otu na Ndị ọrụ niile> Ok
-agba ọsọ P3Dv4 HF2; na-agba ọsọ dị mma.
Edgley Optica 2 ọnwa 4 izu gara aga #1755
Emere m ihe ị gwara m, mana nke ahụ agbanweghị ihe ọ bụla maka na enwere P3D okuku ozugbo m choro iburu ugbo elu ya na udiri ya.
Edgley Optica 2 ọnwa 4 izu gara aga #1756
Ndo, ị na enwe nsogbu. Ihe mbu ị ga - elele:
1} Laghachin n’ime ihe ndia Edgley Optica ma hu ma ndi Otu Obu ha na ndi Oru ha ka na-enyocha. Ekwesiri inwe akara ngbama ojii na-egosi ngbanwe. Ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ:
1a) Uncheck gụọ naanị ma gagharịa usoro ọzọ wee gụgharịa gụgharịa naanị.
Ozugbo emechara nke a, chọpụta na Otu na Ndị Ọrụ niile na-edozi. Gbalịa ụgbọ elu hụ ma ị nwere CTD. I mee nke a, ịchọrọ “Were Nweta” nke folda Edgley Optica. Google "Were windo nweere 10" maka nbudata ogbe.
Windows 10 bụ program juputara na sistem ma MS emeela ọtụtụ ụzọ nchedo / nchekwa. Gbanwe ikikere nchekwa mgbe ụfọdụ ede ederede. Were nwe na-enyere aka ịkwụsị W10 na ọkwa ndekọ site na ịdebanye ikike.
Ezigbo efe efe
ps .... nyochara EO ma ọ ka na-efe nwayọ nwayọ na ORBX
Edgley Optica 2 ọnwa 3 izu gara aga #1760
Nzọụkwụ ziri ezi bụ nke a:
Ugbu a ihe niile dị mma!
Enwere m ike iji ụgbọ elu ụgbọ ala Britain a kacha mma na-efe efe!
Daalụ nke ukwuu maka enyemaka gị plug_nickel!
Edgley Optica 4 ụbọchị 17 awa gara aga #1897
Oge ike page: 0.264 sekọnd